Kare Huang 'Doll' Rinjiyeynta Dijital ah | Abuurista khadka tooska ah
Haddii aan ka raadinno farshaxankan 'DeviantArt' waxaan ku heli doonnaa magaca tommy830219. A taiwan sawir qaade kaas oo aan mar kale ku soo bandhigeyno fanaan si weyn ugu heelan fanka iyo farshaxankaas dhijitaalka ah ee noo ogolaanaya inaan la kulanno magacyo cusub.
Sababta keentay Huang khadadkan waa shaqo lala qabtay qaar ka mid ah barnaamijyadaas oo aan wada ognahay waxaana loo yaqaan 'Doll'. Halabuur sifiican loo qabtay oo ay ka muuqato khadadkiisa saxda ah iyo dhumucdiisaba iyo midab midab leh oo si wanaagsan loo xushay si ay noogu geyso booskaas gaarka ah iyo kuwa gaarka ah ee gabadhaas oo ku seexata miiska qolkeeda.
Gabadhaas iyadaa la seexata taas taagay caruusad android horteeda oo ay weysay xubno ka mid ah jirkeeda sida lugahaas. Waxaa laga yaabaa inay xasuusato Alita, malaa'ig dagaal, laakiin aan uga tagno sidii Android.
Huang wuxuu noo geynayaa shaqo aad u wanaagsan oo ka kooban qaar khadad aad u adag Faahfaahinta saxda ah ee aan la mahadin laakiin ah hab gaar ah oo aad noogu farxin karto sawirkan.
Waxaa jira farshaxanno farsamo heer sare ah haysta, Huang sidaas uma yara, laakiin waa halkee taagan ayaa ku jira halabuurka iyadoo daaqadaas ay furan tahay oo daahyadiina ay ku dhow yihiin inay dhaqaaqaan ka hor muuqaalka, ama sida dhammaan iftiinka qorrax ifaysa ay uga dhex gasho iyada oo gabadha la filayo inay seexanayso.
Tommy830219 ayaa leh Qaabkaaga DeviantArt si aad u sii wado shaqadiisa, muhiim u ah istaroogyadaas iyo muuqaalada maalinlaha ah ee leh jilayaasha xiisaha leh ee tilmaamahooda iyo iftiinka ka dhex muuqda inta badan shaqooyinka uu la wadaago degelkan oo ay aqoonsan yihiin farshaxan yahannada iyo meesha karti badan laga heli karo.
Haddii aad raadineyso wax ka badan dijitaal, Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » 'Doll' waa rinjiyeynta dhijitaalka ah ee Kare Huang